U-qalmitaanka deeqda waxbarasho ee UNICAF, Shuruudaha, iyo Wax kastoo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Deeqda waxbarasho ee Unicaf waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu fudud ardayda Afrika. Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa u-qalmitaanka iyo shuruudaha looga baahan yahay deeqaha waxbarasho ee 'Unicaf' iyo wax kasta oo aasaasi ah oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato fursadda.
Helitaanka shahaadada jaamacad ku taal Mareykanka, Boqortooyada Midowday, ama waddan kasta oo Yurub ah oo deeq waxbarasho ah ayaa abaalmarin weyn leh. Unicaf waxay ardayda siisaa deeq waxbarasho si ay wax uga bartaan jaamacad ku taal mid ka mid ah waddamadan. Sidaa darteed, wax ka baro shuruudaha u-qalmitaanka deeqda waxbarasho ee Unicaf si aad u ogaato haddii aad u-qalanto inaad dalbato.
Iyadoo loo marayo iskaashiga ay la leedahay jaamacadaha ku yaal Mareykanka, Boqortooyada Midowday, iyo Yurub, Unicaf waxay ardayda Afrikaanka ah siisaa kaalmo dhaqaale wax ku barta internetka mid ka mid ah jaamacadahaas. Waqtigan la joogo, Unicaf waxay la kaashanaysaa Jaamacadda Koonfurta Wales (Boqortooyada Ingiriiska), Jaamacadda Marymount California (USA), iyo kan Jaamacadda Nicosia (Yurub).
1 Waa maxay deeqda waxbarasho ee UNICAF?
2 Deeqda waxbarasho ee UNICAF ma runbaa?
3 Immisa ayey tahay deeqda waxbarasho ee UNICAF?
4 Aaway deeqda waxbarasho ee Unicaf?
5 Heerka / Field of Study
6 Muwaadin u qalma
7 Maxay yihiin shuruudaha u qalmitaanka deeqda waxbarasho ee UNICAF?
8 Sideen u dalban karaa deeqda waxbarasho ee UNICAF?
9 Goorma ayey tahay waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga ee deeqda waxbarasho ee UNICAF?
10 Talo soo jeedin
Waa maxay deeqda waxbarasho ee UNICAF?
Ujeedada loo aasaasayo deeqda waxbarasho ee 'Unicaf' ayaa ah in la siiyo ardayda aadka ufiican ee la liido fursada ay ku helayaan shahaadada koowaad ama shahaadada qalin jabinta qiimo jaban oo khadka tooska ah ah, xarun caalami ah oo laga aqoonsan yahay tacliinta sare.
Deeqdan waxaa la siiyaa ardayda ka socota Afrika iyo adduunka oo dhan oo muujiya diiwaanno tacliimeed oo heer sare ah si ay u sii wataan daraasadaha shahaadada koowaad iyo tan sare ee mid ka mid ah jaamacadaha ay wada-shaqeeyaan Unicaf iyada oo loo marayo daraasadda internetka. Jaamacadaha bahwadaagta la ah Mareykanka, Boqortooyada Midowday, iyo Yurub waxaa ka mid ah Jaamacadda South Wales ee UK, Jaamacadda Nicosia ee EU, iyo Marymount California University ee Mareykanka.
Deeqda waxbarasho ee UNICAF ma runbaa?
Haa way tahay. Jaamacadda Unicaf waa iskuul iskuul wax lagu barto oo khadka tooska ah iyo isku dhafan ah oo ka hooseeya Saxaraha Afrika oo bixiya tacliin sare oo ah heerarka caalamiga ah ee ay heli karaan ardayda iyo xirfadleyda Afrika.
Jaamacaddu waxay leedahay xarumo faracyo iyo xarumo waxbarasho oo Afrika ku yaal oo ay ka mid yihiin Nigeria, Ghana, Kenya, Zimbabwe, Uganda, Egypt, Morocco, Somalia, South Africa, Zambia, iyo Malawi.
Iyada oo loo marayo iskaashi ay la leedahay Jaamacadda South Wales ee Boqortooyada Midowday, Jaamacadda Nicosia ee Midowga Yurub, iyo Jaamacadda Marymount California ee Maraykanka, Unicaf waxay siisaa deeqo waxbarasho oo badan ardayda Afrikaanka ah si ay u sii wataan shahaadada koowaad iyo tan koowaad ee jaamacadaha caalamiga. Marka, sii wad aqrinta si aad wax uga ogaato shuruudaha u qalmitaanka deeqda waxbarasho ee Unicaf.
Immisa ayey tahay deeqda waxbarasho ee UNICAF?
Unicaf waxay abaal marin ka badan $ 100 milyan oo abaalmarin maaliyadeed ah siisay in ka badan 30,000 ka-faa'iideystayaal ah in ka badan 156 dal oo adduunka oo dhan ah.
Codsadeyaasha buuxiya shuruudaha u qalmitaanka deeqda waxbarasho ee Unicaf (ka-faa'iideystayaasha) waxaa la siiyaa inta u dhexeysa $ 10,000 illaa $ 20,000 sanadkiiba. Deeqdani waxay daboolaysaa qiyaastii 75% ee khidmadaha wax lagu barto ee qaata inta lagu jiro muddada daraasadda. Qaatayaashu waxay kubixiyaan khidmadaha hadhay qaybo kamid ah bil kasta si ay uga yareeyaan culayskooda dhaqaale.
Guji si aad u Dalbato deeqda waxbarasho ee Unicaf
Aaway deeqda waxbarasho ee Unicaf?
Deeqda waxbarasho ee Unicaf waxaa laga qaadaa internetka mid ka mid ah iskuulada bahwadaagta la ah Jaamacadda Unicaf oo ay ka mid yihiin Jaamacadda South Wales (Boqortooyada Ingiriiska), Jaamacadda Nicosia (Yurub), iyo Jaamacadda Marymount California (USA).
Heerka / Field of Study
Abaalmarinta maaliyadeed waxay u furan tahay bachelor-ka, mastarka, iyo Ph.D. darajooyinka Maamulka Ganacsiga, Maareynta, Maamulka Dadweynaha, Dhaqaalaha iyo Ganacsiga, Cilmu-nafsiga, Waxbarashada, Sharciga, Xisaabaadka iyo Maaliyadda, Luqadda Ingiriisiga iyo Suugaanta, Sayniska Kombuyuutarka, Maareynta Sarkaalka Bixinta, iyo Saadka, Web Design and Development.
Muwaadin u qalma
Deeqda waxbarasho ee 'Unicaf' waxaa heli kara ardayda adduunka oo idil.
Maxay yihiin shuruudaha u qalmitaanka deeqda waxbarasho ee UNICAF?
Hoos waxaa ku yaal shuruudaha u qalmitaanka deeqda waxbarasho ee Unicaf:
Codsadeyaashu waa inay degan yihiin Afrika.
Musharrixiinta waa inay diyaar u yihiin inay kasbadaan wax ka badan $ 20,000 sannad kasta.
Ku-talo-galayaasha helaya waa inay lahaadaan shuruudaha gelitaanka ee barnaamijka daraasadda
Codsadeyaashu waa inay diyaar u noqdaan inay bilaabaan waxbarashadooda lix (6) bilood gudahood laga bilaabo taariikhda helitaanka mid ka mid ah barnaamijyada waxbarasho ee la bixiyo.
Dhinaca kale, waad hubin kartaa haddii aad buuxiso shuruudaha tacliimeed ee barnaamijkaaga xulashada ee jaamacadaha iskaashiga ah adoo gujinaya xiriirada hoose.
Barnaamijyada Jaamacadda South Wales
Barnaamijyada Marymount California University
Jaamacadda Nicosia Barnaamijyada
Barnaamijyada Jaamacada UNICAF
Sideen u dalban karaa deeqda waxbarasho ee UNICAF?
Musharrixiinta buuxiya shuruudaha u-qalmitaanka deeqda waxbarasho ee Unicaf waa inay ku soo gudbiyaan codsiyadooda khadka tooska ah. Codsiga khadka tooska ah wuxuu u baahan doonaa CV-gaaga, shahaadooyinkaaga waxbarasho, iyo qoraalladaada.
Marka aad dalbato, waxaa kula soo xiriiri doona Lataliyaha Ardayda. Codsiga waxaa la siin doonaa tixgelin waxaana go'aan laga gaari doonaa iyadoo lagu saleynayo aqoontaada aqooneed iyo baahida dhaqaale ee Sarkaalka Ogolaanshaha iyo Guddiga Deeqaha.
Ku guuleystayaasha deeqda waxbarasho waxaa lagula soo xiriiri doonaa emayl. Marka, hubi inaad ku darto emayl firfircoon inta aad soo gudbineyso dalabkaaga. Guji hoosta si aad u dalbato haddii aad buuxiso shuruudaha u qalmitaanka deeqda waxbarasho ee Unicaf.
Goorma ayey tahay waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga ee deeqda waxbarasho ee UNICAF?
Deeqda waxbarasho ee 'Unicaf' ma laha waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga maadaama oo ay joogto tahay sanadka oo dhan. Sidaa awgeed, waad dalban kartaa deeqda waxbarasho wakhti kasta oo aad rabto.
Deeqaha ugu sareeya ee NGO-yada ee Nigeria oo leh shuruudaha u-qalmitaanka
Deeqaha Dibloomada Sare ee Kenya
Deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda reer Nigeria ee wax ku barta Dibadda
Deeqda waxbarasho ee ugu sareysa ee loogu talagalay Afrikaanka inay wax ku bartaan Dibadda
Deeqaha Afrikaanka Barashada Hagaha Dibadda
deeqaha waxbarasho ee unicaf
Previous Post:13 Shaqooyinka Ugufiican ee Hooyooyinka Guriga Lagujoogo oo aan Khibrad Laheyn
Post Next:13 Dugsiyada Injineeriyada Kombiyuutarka ee ugu Fiican Caalamka.